CADDAALAD DARADDA LAGULA KACAY BOQOR CISMAAN IYO GUUD AHAAN DALKA SOMALILAND by Maxamed axmed cali(Hadhwanaagnews) Monday, July 09, 2012 Waxaan wax yar ka odhanayaa Xukunka xaqdaradda ah ee lagula kacay boqor cismaan aw maxamuud.Waxaan wax yar ka odhanayaa Xukunka xaqdaradda ah ee lagula kacay boqor cismaan aw maxamuud.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />Marka koowaad Boqor Cismaan waa Boqor dhaqameed si gaar iyo si guudbana qadarin uga mudan cid walba oo soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan bariga Afrika.
Boqor Cismaan wuu ku sifoobay Boqornimada, waxaa markhaati ma doon ah inuu dhexdheaxaadin farabadan ku sameeyey soomaalida dhexdeeda kuna guulaystay, maaha mid ay siisay xukuumadda lagu hungoobay ee Siilaanyo, kamana qaadi karto sida ay maanka ku hayaan wax magaratadda ku xeeran madaxtooyadda Somaliland ee qabyaaladda qoys hoosaadka ku salaysani ragaadisay.
Tani Waxay sii kordhisay cadaaawada ay ku hayso xukuumadda siilaanyo ee lagu khasaaray .
Waxaa xaqiiqo dhab ah oo aan idhaha laga qarsan karayn ah caddaalada darada ka jirta Xukuumadda maanta ka jirta Somaliland kuma koobna cid gaar ah ee mid caam ah oo cid walba oo cadaalad filaysay ay kaga hungowday Xukuumadda.
Waxaan Guud ahaan uga tacsiyadaynayaa ummadda reer Somaliland Cadaalad darada haysata,gaar ahaan Boqorka iyo inta sida cadaalad darada ah ugu xidhan Xabsiyadda Somaliland ee ay ka midka yihiin badhasaabkii Gobolka Hargeysa iyo Agaasimihii Wasaaradda Dibudejinta.